IVilla Rita 1 - I-Airbnb
IVilla Rita 1
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguTerry
IVilla Rita ineeyunithi ezi-3 kunye nendlu yam, iVilla Rita 1 incamathele kwindlu yam kodwa itywinwe ngokupheleleyo kwenye. Le yunithi iye yahlaziywa kwindawo ephezulu ngoNovemba ka-2021.
Sinikezela ngeendawo zokupaka simahla kwipropathi, i-intanethi entle yoonomad, iindawo zegadi ezisanda kulungiswa kunye nepatio encinci yabucala.
Kukho ivenkile encinci eyi-300 mts kude nedriveway yethu kunye nendawo yokumisa imifuno phambi kwabo ukuze ufumane izinto eziyimfuneko kodwa umgama oziikhilomitha ezi-4 (uhambo olufutshane ngebhasi) kukho iikhemesti, iibhanki kunye neegrosari ezinkulu.
IVilla Rita 1 isandula ukuguqulwa (ngoNovemba ka-2021) yalungiswa kwindawo ephezulu. Igumbi lokuhlambela lihlaziyiwe kwaye linesinki entsha kunye (uJohn). Ivilla yonke inemigangatho emitsha yesofa entsha, iTV. Ikhitshi liphinde lalungiswa lanezixhobo zokubala ezintle, isitovu, i-backsplash kunye neekhabhathi ezinetafile ethandekayo enezitulo.
I-intanethi encinci ye-intanethi ekhoyo kwiyunithi nganye iqinisekisa ukuba akukho villa iseleyo ingenayo i-intanethi. Simi ngaphandle kwendlela yesi-3, kwindawo egayiweyo, egadiweyo, iiVillas zethu ziku-200 mts kude nesitrato ukuze sifumane ingxolo yezitrato ezincinci, ungapaka imoto yakho ngokufanelekileyo ecaleni kweyunithi yakho.
4.65 · Izimvo eziyi-107
Siku 7 km ukusuka ezu ave kunye nokhenketho lwetshokolethi.
Siku 300 mts kude ne vicosa wines(indawo yokutyela enkulu)
Iigadi ze-orquídea zikumgama nje weemayile.
Sinendawo yokutyela ebalaseleyo yokutya okuma-700 mts kuphela, kodwa kukho eyesibini malunga ne-3 km enomdlalo omnandi wabantwana.
UJosé kunye nam ( Terry ) singabamkeli bakho. Umntu uhlala ejikeleze nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Garita